Rasaasa News – Itoobiya oo sheegtay inay gacanta ku dhigeen 25-qof oo Al-shabaab ka tirsan
on June 5, 2014 6:20 pm
Khamiis, June 05, 2014 — Booliiska dalka Itoobiya ayaa xabsiga dhigay 25 qof oo ay sheegeen inay xiriir la leeyihiin Xarakada Al-shabaab, kuwaasoo qorsheynayay in ay qaraxyo ka geystaan gudaha dalkeeda, sida ay maanta oo Khamiis ah sheegeen saraakiil Itoobiyaan ah.
Afhayeenka xukuumadda Itoobiya, Shimeles Kemal ayaa sheegay in dadka lasoo xir-xiray ay soo tababartay Al-shabaab ayna qorsheynayeen inay qaraxyo ka geystaan deegaanka Jimma oo 305-km dhinaca Koonfur-galbeed kaga beegan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaas.
“Waxay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen 25-qof oo qorsheynayay inay ka geystaan Itoobiya qaraxyo,” ayuu yiri Kemal oo intaas ku daray in sidoo kale la qabtay hubkii ay doonayeen inay qaraxyada ku geystaan.
Itoobiya oo la wadaagta Soomaaliya soohdin dhirirkeedu yahay 1,600-KM ayaa u dirtay Soomaaliya ciidammo tiradoodu yihiin 4,500 oo askari oo ka mid ah kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
“Ciidamadeenna Soomaaliya ku sugan way sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan kuwa argagaxisada ah,” ayuu afhayeenku yiri, isagoo intaa ku daray: “Tabaha la xiriira argagaxisonimada waxba kama bedeli doonaan howlgalkeenna Somalia.”
Sidoo kale, Shimeles Kemal oo sii hadlayay ayaa yiri: “Ma filayo inay jiraan wax khatar weyn oo weyn oo dalkeenna kusoo wajahan oo ciidamadeenna heegan ku gelinno, balse taxaddar weyn ayaan sameynaynaa.”
Xubno ka tirsan Al-shabaab ayaa horay ugu goodiyay inay weerarayaan Itoobiya si ay uga aargutaan ciidamada ay u soo direen Soomaaliya, iyadoo Oktoobartii la soo dhaafay ay ku dhinteen dalka Itoobiya laba qof oo Soomaali ah oo doonayay inay qaraxiyaan garoonka kubadda cagta ee Addis Ababa.
Hadalkan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo shalay ay ciidanka argagaxisada la dagaalama ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ruux Somali ah oo doonayay inuu isku qarxiyo xarunta Itoobiya.
Al-shabaab ayaa waxay sheegatay mas’uuliyadda Qaraxyo horay uga dhacay dalalka, Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya oo dhammaantood ay cidammo kaga sugan yihiin Soomaaliya.